'ए मेरो हजुर २' को तीन दिनको कमाई कती? – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainment‘ए मेरो हजुर २’ को तीन दिनको कमाई कती?
‘ए मेरो हजुर २’ को तीन दिनको कमाई कती?
September 4, 2017 Keshab Khadka Entertainment, Kollywood, News 0
अभिनेत्री झरना थापा निर्देशित चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’ देशभरबाट आक्रामक व्यापार गर्दै तिन दिनमा ३ करोड ४३ लाख ४१ हजार ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ ।
शुक्रबार देशभर ९० पर्दाबाट ७८ लाख बढी ग्रस कलेक्सन गरेको सिनेमाले पहिलो दिन राजधानीबाट ४५ लाख ५० हजार र राजधानी बाहिरबाट ३३ लाख २१ हजार कलेक्सन गरेको थियो । शनिबार सिनेमाले देशभरबाट १ करोड ६० लाख ३० हजार ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ ।शनिबारको कलेक्सन नेपाली सिनेमाको लागि सर्वाधिक एक दिने ग्रस हो । वितरकले दिएको जानकारी अनुसार शनिबार राजधानीबाट ‘ए मेरो हजुर २’ले ८७ लाख ७५ हजार र बाहिरबाट ७२ लाख ५५ हजार कलेक्सन गर्यो । आइतबार सार्वजनिक विदा परेकोले तेस्रो दिनका अधिकाँस शो हाउसफुल रहे । ईदको विदामा ‘ए मेरो हजुर २’ले राजधानीबाट ५३ लाख १५ हजार र बाहिरबाट ५१ लाख २५ हजार गरि टोटल १ करोड ४ लाख ४० हजार कलेक्सन गर्यो ।
मोफसल वितरक केदार पराजुलीले ‘ए मेरो हजुर २’ को व्यापारलाई ऐतिहासिक भनी टिप्पणी गरेका छन। कतिपय हलको कलेक्सन विश्वास नलागेर दोहोर्‍याएर नै सोध्नुपर्‍यो तेस्तै ‘काठमाडौं वितरक गोविन्द शाहीले ‘ए मेरो हजुर २’ मा दर्शक को चापले गर्दा विदेशी फिल्मलाई समेत ठूलो धक्का लागेको बताए। अधिकांश हलबाट विदेशी फिल्म उतारेर ‘ए मेरो हजुर २’ लगाइएको छ बितरक शाहीले भने ।
सुहाना इन्टरटेनमेन्टको व्यानरमा सुनिलकुमार थापा निर्मित यस चलचित्रमा साम्रागी राज्यलक्ष्मी शाह, सलिनमान बनियाँ, सलोन बस्नेत, अम्बर सुवेदी, अनुराग कुँवर, बुद्दी तामाङ, अनुभव रेग्मी, विल्सनविक्रम राई लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । ‘ए मेरो हजुर २’ को कथा हरिहर अधिकारीले लेखेका हुन् । संजय लामाले छायाङ्कन गरेको सिनेमाका पटकथाकार सामिप्यराज तिमल्सिना हुन् ।
चलचित्र “जोनी जेन्टलम्यान” का कलाकार प्रोमोसनमा ब्यस्त ( भिडियो सहित)